Farriinta Ayaa Soo Saartay Natiijooyin
Monday, June 20, 2011 Arbacada, Oktoobar 16, 2013 Jenn Lisak Golding
Markaan suuqgeyneyno, marar badan, waxaan ka fikirnaa kaliya natiijooyinka. Waxaan rabaa inaan badalo rajadan badan, waxaan rabnaa inay dadku ka feejignaadaan wax soo saarka X, waxaan rabaa retweets / saamiyadaan badan, iwm. Ha iga qaldan, waa hubaal inay muhiim tahay in lala socdo waxyaalahan si loo ogaado hadii suuqgeena fariin ayaa shaqeyneysa. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaday in markaan ujeedo gaar ah aanan uheyn fariimaheyga suuq geynta, waxaan helay kaqeyb qaadashada ama natiijooyinka ugu badan.
Ka fikir waxa ku saabsan: ma qortay qoraal u eg sidii qosol ama baloog ku saleysan fikrad ku saleysan oo ka soo horjeedda "10 Tallaabo oo ku saabsan Sida Loo Kordhiyo Bloggaaga"? Muxuu ahaa heerka jawaab celinta / kaqeybgalka ee boostadaas? Waxaan diyaar u ahay in aan sharad in ay waxoogaa ka badnayd halkii caadiga ahayd ee "qiime-ku dar" ee ku saabsan galinta astaamaha meta.
Marka xigta waxaad haysaa wax aad dhahdo oo laga yaabo inay ka badan yihiin fikradaha ku saleysan qiimaha-ku darista, qor. Aragtidaada ka dhiibo. Xitaa haddii dadku aysan oggolaan, waxaad weli bilaabi kartaa wadahadal macno leh oo dadku ku raaxeysan doonaan oo ay wadaagi doonaan.
Tags: AnalyticsGelitaankii 2008WordPress
Jawaab barta Twitter-ka wayna iibsan doonaan
Taariikhda Webka iyo Falanqaynta Bulshada